Cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo kulan dhiiri gelin ah loo sameeyay “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo kulan dhiiri gelin ah loo sameeyay “SAWIRRO”
Marwada Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Maryan Maxamed Cabdul ayaa kulan dhiir-gelin ah la qaadatay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ee ku sugan gobolka Hiiraan.
Kulanka oo ka dhacay deegaanka Jante-Kuundisho ayaa waxa ay saraakiisha ugu amaantay sida ay har iyo habeen ugu heelanyihiin u istaag amniga guud ee gobolka iyo ka difaacidda shacabka maleeshiyaadka Al-Shabaab ee dhibta ku haya bulshada qeybaheeda kala duwan.
Marwo Maryan Maxamed Cabdul ayaa xustay in ciidamada xoogga dalka ay ku shaqeeyaan daruufo adag, iyadoo bogaadisay guulaha ay dhawaan ka gaareen howlgallo amni xaqiijin ah oo ay ka sameeyeen deegaanno ka tirsan gobolka oo ay ka saareen maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Taliyaha ciidanka xoogga dalka ee Gobolka Hiiraan Kornayl Towane Axmed Gurey ayaa tilmaamay in cidiamadan oo ka tegay Muqdisho loogu tala galay in ay ka howlgalaan deegaannada bariga Gobolka Galguduud, isaga oo intaa ku darray in ay jiri doonto wadda-shaqeyn buuxda oo dhaxmarta saraakiisha ciidanka labada gobol ee Hiiraan iyo Galguduud.
Ku simaha Madaxweynaha Soomaaliya oo ku baaqay in la joojiyo colaadaha u dhaxeeya Walaalaha Sool iyo Nugaal WARSAXAAFADEED